ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အမေး (၅၀ ) နှင့် အဖြေ (၅၀ ) အပိုင်း ၂
မေ ၅, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၆ ညနေ News Code : 828015 Source : ABNA Link:
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အမေး (၅၀ ) နှင့် အဖြေ (၅၀ ) အပိုင်း ၂ အဖြစ် အဗ်နာ ချစ်ပရိတ် သတ်များ ကို မေးခွန်း ၅၁ မှ ၁၀၀ အထိ ဖော်ပြ အပ်ပါတယ်။
(၅၁)အမေး ။ စလာမ်...
(၅၂)အမေး ။ စလာမ်...
(၅၃)အမေး ။ စလာမ်...
အဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မိန့်တော်မူထားပါသည်။
စူရဟ် အဟ်ဇာဗ် စူရစ်အမှတ်တော် ၃၃ ၊ အာယတ်တော်အမှတ် ၂၁ ဖြစ်ပါသည်။
(၅၄)အမေး ။ စလာမ်...
(2)sonat လက်မခံဘူး လို့ ဘယ်ရှီအာ ပညာရှင်က ပြောဖူးရေးဖူးပါသနည်း ? ရှီအာတွေ စွန္နတ်ကို လက်ခံ မခံဆိုတာ စာတတ်သူတိုင်းသိပါတယ်။ အကြောင်းက ရှီအာ ထိပ်တန်းအာလင်မ် ပညာရှင် ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ဆရက် သဗါသဗါအီး (သဖ်စီမီးဇန် ကျမ်းရှင်) အနေဖြင့် ((စွန်နတ် နိုနဘီ (ဆွ) ဆိုသည့် ကျမ်းကို ပြုစုရေးသားထားပါတယ် ။ ဖွာရစီ ၊အူရ်သူ ဘာသာများဖြင့်လည်း ဘာသာပြန်ပြီးသွားပါပြီ။ အင်ရှာအလ္လာဟ် မြန်မာလိုလဲ ထွက်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် katanat ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ ဆိုသည့် မေးခွန်းဟာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ သွားပြီး ။
(၅၅)အမေး ။ စလာမ်...
(တိုက်ရိုက်မိုဗိုင်း ဖြင့် မေး ၁၀ ၊၁ ၊၂၀၁၃ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၈ နာရီ ၄၅မိနစ် ခန့် )
(၅၆)အမေး ။ စလာမ်...
(၅၇)အမေး ။ စလာမ်...
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် အဘယ်ကြောင့် နမာဇ် ကို ကောင်းမှု အရာများ အားလုံးကိုလက်ခံဖို့ အတွက် သော့ချက်အဖြင့် သတ်မှတ်ထားရပါသနည်း၊ ရှင်းသွားရန် ပမာပေး နိုင်ပါသနည်း?
အဖြေ ။ ။ စစ်မှန်သည့် ဟဒီးစ်တော်အရ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် နမာဇ် ကို ကောင်းမှုအရာများ အားလုံး ကိုလက်ခံဖို့ အတွက် သော့ချက်အဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဟဒီးစ်တော်အား ဝဆာအေလွရ်ှရှီအာ အတွဲ ၃ စာမျက်နှာ ၂၂ ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၁ တွင် လေ့ လာနိုင်ပါသည်။
ရှင်းသွားရန်ပမာပေးရမည်ဆိုလျှင်ကားမောင်းသမားအားယဉ်ထိန်းရဲများမှတရားဝင်ယဉ်မောင်းလိုင်စင် တောင်းခံလျှင် အိမ်ဂရံ ၊ ဘွဲ့လက်မှတ် ၊ အိမ်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်၊မှတ်ပုံတင်၊ပတ်စပို့တ်စသည်ဖြင့် ပြလျှင်လက်ခံမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည်လည်းတရားဝင်နမာဇ်ကိုကောင်းမှုအရာ များ အားလုံး ကိုလက်ခံဖို့ အတွက် သော့ချက်အဖြင့် သတ်မှတ်ထားရာ တရားဝင် နမာဇ် ကိုလက်မခံ မခြင်း အခြား ကောင်းမှု အရာများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ချေ။
(၅၈)အမေး ။ စလာမ်...
အဖြေ ။ ။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် စူရဟ် အီးဗရာဟီးမ် အာယတ်တော်အမှတ် ၈ တွင်မိန့်တော် မူထားသည်။အဓိပ္ပာယ်မှာ - ထိုပြင်ဟဇရတ်မူဆာ(အ.စ)အနေဖြင့်မိန့်ကြားသည်မှာ - အကယ်၍ အားလုံးသော လူသားများအနေဖြင့် ကာဖေရ် ဖြစ်သွားကြမည် ဆိုလျှင်လည်း အနည်းငယ် မျှပင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်ချေ။အကြောင်းမှာ ဧကန်မလွဲ အရှင်မြတ်သည် လူသား အားလုံးထံ မှ လိုလားတောင့်တခြင်း ကင်းမဲ့တော်မူသည့်အတွက် ဖြစ်ပေသည်။
ရှီအာတွေက အလီ(ရ) နဲ့ မှားယွင်းပြီး တမန်တော်မိုဟ္မဒ်(ဆွ)အားနဗူးဝသ်ပေးခြင်း ဟုယုံကြည်လက်ခံသူများဖြစ်ကြောင်း နင့် တမန်တော်မြတ်ထက် အလီသခင်ကိုသာ အမြတ်တနိုးဖြစ်ပြီး ကျန်ဆွဟာဗာ နှင့် ခလီဖရချေဒိန် ကိုလည်းမကောင်းပြောကြောင်းကြားသိရပါသည်။ဟုတ် မဟုတ် ပြန်ကြားပေးပါရန် ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
(၅၉) မေးမြန်းသူ - [email protected]
(၆၀)မေး။ ရှီအာများအမည်ဖြင့်လစဉ်ဘာ သာရေးစာစောင်ထုတ်ခြင်းနှင့်တစ်နှစ်တစ် ကြိမ်သွေးလှူဒါန်းခြင်း သည်မည်သည့်လုပ်ရပ်ကပို မွန်မြတ်ပါ သနည်း ?
အဖြေ ။ ။ လုပ်ရပ် နှစ်ခု စလုံးကောင်းမွန်ပါသည် ။ သို့သော် ရှီအာများ နှင့် မွတ်စလင်များအတွက် ပိုမိုပြီး အကျိုး အမြတ် ကို ဖြစ်ထွန်း စေသည့် လုပ်ရပ်က ပိုမိုပြီး မွန်မြတ်ပါသည်။ (စာစောင်သည် ရာနှင့်ချီပြီးရှီအာများထံရောက်နေပြီးဖတ်နေကြပါသည်။…)ဤအတွက်ကြောင့် စာစောင်ထုတ်ခြင်း သည် ပိုမိုပြီး မြင့်မြတ်ပါသည်။
(တိုက်ရိုက်မိုဗိုင်း ဖြင့် မေး ၂၈ ၊၁၀ ၊၂၀၁၂ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၉ နာရီ ခွဲ ခန့် )
(၆၁)အမေး ။ စလာမ်
အစ္စလာမ်မှာအေမာမ် ဟိုစိုင်း (န) (အ.စ) အတွက် ရည်စူးပြီး သွေးလိုအပ်နေသော ကာဖရ် လူနာ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ကျတော်တို့ရှီအာတွေသွေးလှူဒါန်းခွင့်ရှိ ပါသလား?
(၆၂)မေး ။ ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊သူများအနေဖြင့် ပေါင်းပြီး အပျော်ခရီး ထွက်မည်ပြီးနောက် ၊အပျော်ခရီးစဉ်အတွက်ကစားနည်းများ( ဥပမာ ရေခဲများဖြင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပစ်ပေါက်ကစားခြင်း စသည်ဖြင့် ) ကစားမည်၊ပြီးနောက်ဤလုပ်ရပ်ကိုလည်း ပိုင်သည်ဟု သတ်မှတ် ထားကြသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည် ပြဿနာ ရှိပါသလား?
(၆၃)မေး ။ ။ စွန်နီ ကောင်လေးများ နှင့် ရှီအာ ကောင်မလေးများ နေကာ ပြုခွင့်ရှိပါသလား? ရှီအာကောင်လေး အနေဖြင့် စွန်နီ ကောင်မလေး နှင့် နေကာ ပိုင်ပါသလား?
(၆၄)မေး ။ ။ ဗလီတစ်လုံးမှာ ဝဇူလုပ်ပြီး အခြား ဗလီတစ်လုံးမှာ နမာဇ် သွားဖတ်ခွင့် ရှိပါသလား? အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက် သည် ယနေ့အထိ ဤကဲ့သို့ပြုခဲ့မည် ဆိုလျှင် မည်သည့် တာဝန်ရှိပါ သနည်း ?
(၆၅)မေး ။ ။ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါသည်။ အင်တာနက်ထိုင်သူများသည် (ဟလ္လာဟ် ၊ဟရမ်) ကို အသုံးပြုကြပါသည်။မည်သည် အမိန့်ရှိ ပါသနည်း ?
(၆၆)မေး ။ ။ အကယ်၍ နေရာတစ်နေရာ ၁၀ ရက်နေရန် နီယသ် ပြုထားပြီးခရီးထွက်ခဲ့မည်။ ၎င်းနေရာ အား စဟိုရ်နမာဇ် အာဇန် ပြီးမှ ရောက်မည် ဆိုလျှင် ၎င်းခရီးသည်၏ ရိုဇာ ပိုင်ပါသလား?
စသည်ဖြင့် အဖိုးတန် မေးခွန်းများ နှင့် အဖြေများကို အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာ နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
(၆၇)မေး ။ ။ အကယ်၍ နေရာတစ်နေရာ ၁၀ ရက်နေရန် နီယသ် ပြုထားပြီးခရီးထွက်ခဲ့မည်။ ၎င်းနေရာ အား စဟိုရ်နမာဇ် အာဇန် ပြီးမှ ရောက်မည် ဆိုလျှင် ၎င်းခရီးသည်၏ ရိုဇာ ပိုင်ပါသလား?
(၆၈)မေး ။ ။ စလာမ်
(၆၉) မေး ။ ။ စလာမ်
ကျွန်တော်တိုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှီအာတစ်ယောက်သည် ရှီအာမဟုတ်သူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဇာတ်ပျက်သွားပါသည်။ပြီးနောက်လူအများအရှေ့ သောကြာနေ့တွင် ဂျိုမာနမာဇ်တွင် ပြန်ပြီး သောင်ဗာ လုပ်ပြီး ရှီအာ ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ ပါသည်၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်ကဲ့သို့ ဟဇရတ်အာယာ သွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက် ခါမေနာအီ ၏အမြင်တွင် ရှိပါသနည်း
(၇၀)အမေး ။ စလာမ်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်မိမိခင်ပွန်းသည်နှင့်ကာမဆက်ယှက်မည်။ပြီးနောက်သူမ၏ သားအိမ်အတွင်း သုတ်ရည်ကျန်နေမည်၊သူမသည်ချက်ချင်းဂိုစ်ပြုမည်၊ဂိုစ်ပြီးနောက် သူမ၏သားအိမ်မှသုတ်ရည်ပြန် ထွက်လာမည်ဆိုလျှင်သူမ၏ဂိုစ်ပိုင်ပါသလား?
အကယ်၍ခင်ပွန်းသည်၏သုတ်ရည်ဖြစ်ပါက ထပ်ပြီးအသစ်တဖန်ဂိုစ်လေဂျနာ ပတ်သ်ပြုဖို့ မလိုအပ်ချေ။
ကြည့် - အေစ်သေဖ်သာအ် ၊ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီမေးခွန်း အမှတ်၁၇၃
(၇၁)အမေး ။ ။ နမာဇ်အီးဒ်ဖေသ်ရ်ကဇွာရှိပါသလား?
ကြည့် - အေစ်သေဖ်သာအ် ၊ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီမေးခွန်း အမှတ်၆၇၃
(၇၂)မေး ။ ။ စလာမ်
(၇၃)အမေး ။ စလာမ်
(၇၄)အမေး ။ ။ စလာမ်
ကြည့် - အေစ်သေဖ်သာအ် ၊ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီမေးခွန်း အမှတ်၁၃၈၃
ကြည့် - အေစ်သေဖ်သာအ် ၊ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီမေးခွန်း အမှတ်၁၃၈၂
(၇၆)မေး ။ စလာမ်
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အမြင်၌ ဂိုနာ ကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများ ကိုဖော်ပြပေးပါ။
ကြည့် - ဂိုနာ ဝါ အာမေရ်ဇေရှ် အဇ်မန်(န)ဇရ် ကုရ်အာန် - အလီရေဇာအဆ်ရာနီ၊ စာမျက်နှာ ၂၇ မှ ၃၆
(၇၇)မေး ။ စလာမ်
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ ဝစီယတ် သေတမ်းတွင် မိမိပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ကဇွာနမာဇ်၊ရိုဇာဖတ် ပေး၊ထားပေးပါဟုမှာခဲ့လျှင် အမှာခဲ့ခံရသူအပေါ်လုပ်ပေးရန်ဝါဂျဗ်ဖြစ်ပါသည်။ မမှာခဲ့ပါက ဆွေမျိုးများ (အစ်ကို ၊အစ်မ၊ညီ၊ညီမ၊တူ၊တူမများ )အပေါ် လုပ်ပေးရန် မိုစ်သဟဗ် ဖြစ်ပါသည်။
(၇၉)မေး ။ ။ စလာမ်
အမျိုးသမီးများ ဟိုင်းဇ်အချိန်တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကွရ်အာန်၏ အာယတ် (၇၀) ဖတ်လျှင် မက္ကရူဟု ဆိုပါသည်။
ထိုအချိန်ကာလတွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကွရ်အာန်ကို စာသားမထိပဲ ဖတ်ရွတ်ခွင့်ရှိ သည်ဟုလည်း သိထားပါသည်။
ဟိုင်းဇ်လာနေချိန်တွင် ၁အာယတ်ဖတ်ဖတ် ၊အာယတ် (၇၀) ဖတ်ဖတ် ခြုံ၍ပြောရလျှင် မက္ကရူဖြစ်ချေသည်။
(၈၀)မေး ။ ။ စလာမ် မွန် အလိုင်ကွမ်း
တစ်ချို့လူများသည် ဇေယာရတ် သည်ဟဂ်ျထက် အရင်လုပ်ရမည် ပို၍အရေးကြီးသည်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဲဒီလူများကို အကောင်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးအဖြေ လေးပြောပြပါလား။
(၈၁) မေး ။ ။
ရှီအာ မဟုတ်သူများအတွက် မဂျလစ်အစီအစဉ် နှင့် ကုရ်အာန် ခါနီ ပြုပေးခြင်း သည် ရှရီအတ်တွင်
(၈၂)မေး ။ ။ စလာမ်အလိုင်းကွမ်း....
မရာဂျေ့ အပေါ်မည်သို့ တာဝန်ရှိသနည်း။
မဆာအေ အမှတ် ၆၇၁ - သောကြာနမာဇ်သည် ၂ ရကတ် ဖြစ်ပါသည်။ သောကြာနေ့တွင် ဇဟိုရ်နမာဇ်၏အစားဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၊အေမာမ်မာစူမ်(အ.စ)နှင့်အထူးရွေးချယ်ခြင်း ခံထားရသည့် နိုင်ဗေအေမာမ် (အ.စ)တို့ အချိန်ကာလ တွင် ဝါဂျစ်ဗ်ဗေ အိုင်နီ ဖြစ်ပါသည်။
(၈၃) မေး ။ ။ စလာမ်မွန်း အလိုင်ကွမ်း
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ( မြန်မာ ) ရှိ ရှီအာ များအကြား အစဉ်အလာတစ်ခု ရှိပါသည်။ မရက်သ် ကို သဖ်နာ ပြီးနောက် ၊ မရ်ဟွမ် အတွက် ကွယ်လွန်သည့် နေ့ ၇ ရက်ပြည့်သည်နေ့ (သို့) ရက် ၄၀ (သို့) တစ်နှစ် (သို့) နှစ်တိုင်း ကုရ်အာန် ခတမ် (ကုရ်အာန်ခါနီ ) လုပ်ပါသည်။
ဤလုပ်ရပ်သည် (ကုရ်အာန်ခါနီ ) သည် ရှရီအီ အမိန့် တစ်ခု အဖြစ် မရှိချေ။ ထို့ပြင် လူထုများအကြားမရက်သ် အား ရိုသေလေးစားပြီး ၊ကျန်ရစ်သူများကို သတိပေးခြင်း အဖြင့် ကျော်ကြားသည့် အစဉ်အလာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
(၈၄)မေး ။ ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုသူ အေမာမ် မေ ဂျမာအတ်၏ စည်းကမ်းများ ကို သိပါရစေ?
(၈၅) မေး ။ ။ ကွယ်လွန်သွားသည် မိုဂ်ျသဟစ် ၏ သက်္ကလီးဒ် ပြုလုပ်လို့ ရပါသလား?
(၈၆)မေး ။ ။ စလာမ်...
(၈၇)မေး ။ ။ ဝါဂျိဗ် ဂိုစ်လ်(ဂိုစိုလ်) များ ကိုဖော်ပြ ပါ။
(၈၈)။ မေး ။ ။ စလာမ်
(၈၉)မေး ။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အကျယ်ဖွင့်ဆို သည့်သုခမိန် (မိုဖရ်စေ) ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိ ပါသနည်း
၁ ။ မိုဖရ်စေရန်နေ မာစူမ် ၊ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အကျယ်ဖွင့်ဆို သည့် မာစူမ် သုခမိန် များဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) နှင့်အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)
ကြည့် - ဒရ်စ်နာမေယေ အာရှနာယီ ဗာ မဗာနီ ဝါ ကဝါအစ်ဒ် သဖ်စီးရ် ကုရ်အာန် (ခိုလာဇာ)ကျမ်းစာမျက်နှာ ၇၂
(၉၀)မေး ။ ။ စွန္နတ် ၏ ခက်ဆစ်အဓိပ္ပါယ် လေးကို သိပါရစေခင်ဗျာ
စွန္နတ် ဆိုသည် စကားလုံးအား ရီဝါယတ်တော်တွင် သုံးထားပါက အကယ်၍ အလ္လာဟ်ဖက်မှ ဆိုလျှင် ((ဖရီဇာ)) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ၊တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ဖက်မှ ဆိုလျှင် ((ဝါဂျစ်ဗ်)) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါ သည်။
အကယ်၍ ဖေက်ဘာသာရပ်တွင် သုံးထားပါက ((မိုစ်သဟဗ်)) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ ပြီး၊အူစူလေဖေက် ဘာသာရပ်တွင် သုံးထားပါက ((ပင်မအဓိက အခြေခံ လေးခု (ကုရ်အာန် ၊စွန္နတ် ၊အေဂ်ျမယ ၊အက်လ်) မှ တစ်ခု )) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
ထိုပြင် အေလ်မေ ကလာမ် ဘာသာရပ်တွင် သုံးထားပါက ((စွန်နီ်)) ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပါသည်။
(၉၁)မေး ။ ။ မနုဿလူသား ၏ ကောင်းမှု ကုသိုလ်များ ကို ပျက်ပယ်စေသည့် အရာ များကိုဖော်ပြပါ။
(၉၂)မေး ။ ။ မနုဿလူသား ၏ မကောင်းမှု အကုသိုလ်များ ကို ပျက်ပယ်စေသည့် အရာ များကိုဖော်ပြပါ။
၂။ ဂိုနာယေ ကဗီရာများ မှ ရှောင်ခြင်း
(၉၃)မေး။ ။ စလာမ် … ဂျဟန္နမ် ငရဲသားများ အ ဝတ် သည် မီးထည် ဆို သည်မှာ ဟုတ်ပါသလား
(၉၄)မေး ။ စလာမ် - အဟ်ကမ် ဆိုသည်မှာဘာလဲ ဆိုတာရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ ။ အဟ်ကမ်ဆိုတာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ပြငှာန်းထားသည့် ဆောင်ရန်၊ရှောင့်ရန်များကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ပိုမိုပြီးတိကျသွာဖြေရမည် ဆိုလျှင်လူသားတိုင်း၏ အလုပ်တိုင်းဟာ ၊အောက်ဖော်ပြပါ
၁။ဝါဂျစ် (မပြုမနေရ၊မပြုလျှင် ဂိုနာဖြစ်ပေမည်)
(၉၅)မေး ။ စလာမ် ...
(၉၆)မေး ။ ။ စလာမ်
(၉၇)မေး ။ ။ စလာမ်
(၉၈)မေး ။ ။ အကယ်၍ မဟ်ရမ် အမျိုးသမီးများထဲမှ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အတွက် ၊၎င်း၏မဟ်ရမ် အမျိုးသား မှ ဟေဂျဗ် မဝတ် သည့်အတွက် ၊၎င်းကို ရိုက်နက်မည်ဆိုလျှင် ရိုက်နက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား၊အကြောင်းသည်ကား ထို အမျိုးသမီးဟေဂျဗ်ဝတ်လာရန် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးကို အများကြီးအား ၎င်း အတွက် လက်ခံ၊လာစေရန် အသုံးပြုပြီး ဖြစ်ပေသည်။
(၉၉)မေး ။ ။ စလာမ်
ဖြေ။ ။ တမန်တော်မြတ် ဟဇရတ် အီဆာ (အ.စ) ၏မွေးဖွားချိန်နှင့် နေရာနှင့် ပတ် သက်ပြီး အကွဲအလွဲရှိပါသည်။ ထိုပြင် အတိအကျ မသိရပေ။
(၁၀၀)အမေး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး (လင်နှင့်မယား) အတူ ဂျမာအတ် နာမာဇ်ဖတ်လို့ ရပါ သလား။